Amathrendi okubumba alo Eva lonyaka omusha | Bezzia
Amathrendi we-Makeup walobu busuku bonyaka omusha
USusana Garcia | | Ubuhle, Maquillaje
Yize usuku olwandulela uNcibijane lwehlukile kweminye ngenxa yezimo esizithola sikuzo, iqiniso ukuthi lesi yisikhathi sonyaka esifuna ukuzenza sibahle ngaso, ngoba kumayelana nokuvalelisa kulo nyaka futhi ukwamukela okulandelayo. Ngakho-ke sizobona ezinye izitayela zokwenza izimonyo ngalobu busuku bonyaka omusha.
Ake sibone ukugqugquzelwa kokwenza izimonyo ngoNcibijane, ukuze lungiselela ukufika konyaka omusha lokho kuzoletha izinto ezinhle nezingakholeki. Kufanelekile ukubeka izingubo zikanokusho eceleni futhi ube muhle ngamathrendi wokwenza izimonyo.
1 Isibani sobuso bakho
2 Izithunzi ezikhazimulayo
3 Isifo senhliziyo
4 Amashiya amakiwe
5 I-eyeliner ehlukile
6 Izindebe ezijulile ze-burgundy
Isibani sobuso bakho
Enye yezinto esithanda kakhulu ukwakheka kwamanje ukuthi singanika ukukhanya ebusweni ukuze kukhanye futhi kubukeke kungokwemvelo ngokwengeziwe. I- Ama-Highlights akufanele alahleke ekwakhekeni kwakusihlwa ngakho-ke akusindi kakhulu. Thenga okokugqamisa okuhle kobuso bakho ubusebenzise ezindaweni ezithile ezifana nebhuloho lekhala, lesilevu noma lelezihlathi. Lokhu kuzosiza ukukhanyisa ubuso ezindaweni ezithile ngokugqamisa lezi zingxenye.
Ngo-Eva Wonyaka Omusha esikufunayo ukukhanya ukugubha unyaka omusha, ngakho-ke ukuthinta kokucwebezela ekubumbeni kuhlala kukhona. Kulokhu esikhuluma ngakho izithunzi ngokuthinta okukhazimulayo, okuzofakwa kulo nyaka kunanini ngaphambili. Lezi zinhlobo zezithunzi zilungele usuku olwandulela unyaka omusha, ngoba yisikhathi esihle sonyaka sokukhanyisa izingubo zakho nezimonyo zakho. Ungabheka ama-shades egolide noma esiliva, okuyizinto ezinesibindi kakhulu, yize kukhona izithunzi zazo zonke izinhlobo ezinokucwebezela, kuyo yonke imibala.
Ama-eyelashes enye ingxenye esithanda ukuyiqokomisa, ikakhulukazi manje njengoba ukubukeka sekuyingxenye eyinhloko yobuso bethu. I- imivimbo yesifo senhliziyo iyadingeka. Uma ungenazo isikhathi eside, siphakamisa ukuthi wenze ezinye izandiso ze-eyelash uma usenesikhathi. Ziyimvelo kakhulu futhi zihlala amasonto ambalwa, ngakho-ke umphumela muhle. Uma ama-eyelashes akho asevele futhi eminyene, ongakwenza ukwengeza i-mascara ebenza bagqame ngokwengeziwe.
I-Las amashiya okunye okumele ukubukeke kwakho kulobu busika. Ngobusuku obusha bonyaka omusha ukubukeka kuzobaluleka, ngakho-ke kuzofanele ukuthi sinakekele lawo mashiya, siwamake. Uma uthanda umphumela ongokwemvelo ngokwengeziwe, sebenzisa ipensela ukuwagcwalisa nokuwakha, kepha ungawenzi ngokweqile. Sebenzisa ibhulashi ukuwahlanganisa ngaphambili bese ususa noma yiziphi izinwele ezeqile. Ishiya elihlanzekile lisho okuningi ngokubukeka kwethu.
I-eyeliner emnyama isebenza njalo, kepha njalo manje siyathanda ukuzama izinto ezintsha. Kulokhu, u-Eva Wonyaka Omusha yisikhathi sokuqhubeka kancane ngisho nangezimonyo zethu, ukuze uzame i-eyeliner ehlukile. Bheka i- ezambiwa ngegolide noma ngomphumela othile wokucwebezela lokho kwenza ukubukeka kwakho kuvelele futhi ulinge ngokuthile okusha. Uthola ukubukeka okunesibindi nokuhlukile.
Izindebe ezijulile ze-burgundy
Njalo ngonyaka sithi ngoKhisimusi umqondo ukusebenzisa umbala omuhle wezindebe obomvu, ngoba uyinto yakudala, kepha iqiniso ukuthi kulo nyaka siyayithanda imiphumela ebabazekayo. Yingakho sakhetha izindebe ezimnyama, nge imibala efana ne-burgundy, efanelekile ebusuku. Kodwa-ke, uma unezindebe ezondile futhi ufuna ukuthi zibonakale zijiyile, sebenzisa amathoni wemvelo futhi akhanyayo. Kepha imibala efana ne-burgundy noma obomvu obomvu umkhuba.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Amathrendi we-Makeup walobu busuku bonyaka omusha
Izimbangela ze-3 zokuntuleka kwesifiso sobulili kule mibhangqwana
Jabulela izinzuzo zamakamelo okuhlala amancane